Kildare मा एक साहसिक संग यसको लागि एक ब्रेक बनाउनुहोस्
२० सर्वश्रेष्ठ चीजहरू Kildare मा गर्न
परिवार, जोडे, इतिहास प्रेमीहरू, साहसिक खोज्नेहरू, पहिलो पटक भ्रमण, चीज गर्न को लागी
प्राचीन पूर्वी नुक्कड र crannies को साथ अन्वेषण गर्न को लागी जादुई जंगल पैदल यात्रा, सुन्दर महल होटलहरु सम्म, हामी पनी देश मा केहि उत्कृष्ट गोल्फ कोर्सहरु को लागी तपाइँको स्विंग को अभ्यास गर्न को लागी फटिरहेको छ।
Kildare प्रस्ताव गर्न को लागी धेरै छ, त्यसोभए किन तपाइँको रहने बाल्टी सूची मा हाम्रो सिफारिशहरु को केहि नजोड्नुहोस्!
आयरिश नेशनल स्टड र बगैचा
आयरिश नेशनल स्टड २
थोरब्रेड काउन्टी को रूप मा परिचित, Kildare प्रभावशाली घर हो आयरिश नेशनल स्टड। Tully मा घोडा प्रजनन सुविधा संसार मा सबै भन्दा भव्य घोडाहरु को केहि घर हो र पनि अन्वेषण गर्न को लागी सुन्दर जापानी बगैंचा समेटेको छ।
Mondello पार्क फेरारी
Kildare मा तपाइँको अर्को रोमांच को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ? मोन्डेल्लो पार्क तपाइँ क्रमबद्ध गर्नुभयो!
कार र मोटरबाइक दौड को एक रोमाञ्चक कार्यक्रम Mondello मा हरेक वर्ष आयोजित छ। यसको अतिरिक्त त्यहाँ एक रेसि Dri ड्राइभि School्ग स्कूल छ जहाँ मानिसहरु निर्देश र शिक्षण प्राप्त गर्न सक्छन्। विवरण को लागी सर्किट मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
किल्डारे फार्म फूडहरू
Rathmuck, कं Kildare
आयरिश ग्रामीण जीवन को सर्वश्रेष्ठ को लागी नि: शुल्क अनुभव गर्नुहोस्, Kildare शहर बाहिर केहि मिनेट मात्र!
किल्डारे फार्म फूडहरू आगन्तुकहरु एक परिवार को अनुकूल खुल्ला खेत अनुभव प्रदान गर्दछ, जहाँ तपाइँ एक पैसा चार्ज बिना एक प्राकृतिक र आराम सेटिंग मा खेत जनावरहरु को एक विस्तृत विविधता देख्नुहुनेछ।
आगन्तुकहरु एक शान्त ग्रामीण इलाका को वातावरण को आनन्द उठाउनेछन्, र हाम्रो खेत जनावरहरु लाई खुवाएर वा फार्म क्याफे मा एक स्वादिष्ट उपचार को आनन्द ले आफ्नो यात्रा को धेरै बनाउन सक्छन्।
Kildare को नहरहरु तल एक क्रूज संग तपाइँको साना कप्तानहरु लाई यो मध्यवर्ती ब्रेक मनोरन्जन राख्नुहोस् बर्ग यात्रा! सल्लिन्स मा शुरू, बार्ज ट्रिप को परम्परागत नहर बार्ज डुats्गाहरु Kildare ग्रामीण इलाका को माध्यम बाट पाल।
बच्चाहरु किंगफिशर, dragonflies, बतख, हंस र अधिक जस्तै बैंकहरु संग वन्यजीवन को लागी आफ्नो आँखा खुली राख्न सक्छन्। साना बच्चाहरु ताजा हावा मा एक दिन को आनन्द लिनेछन्, सबै जबकि नहर, बार्ज र पुल को इतिहास को बारे मा सिक्दै। पछाडि संसार छोड्नुहोस् र पानी मा एक साहसिक मा बाहिर सेट!
लुलीमोर हेरिटेज पार्क २
लुल्लीमोर हेरिटेज र डिस्कवरी पार्क एक दिन आगन्तुक आकर्षण Rathangan काउन्टी Kildare मा एलन को दलदल मा एक खनिज टापु मा स्थित आयरिश विरासत र प्राकृतिक वातावरण को अन्वेषण को लागी एक सही सेटिंग हो।
Lullymore विरासत र डिस्कवरी पार्क पनि एक ठूलो साहसिक खेल क्षेत्र ट्रेन यात्राहरु पागल गोल्फ फंकी वन इनडोर खेल केन्द्र र प्रसिद्ध Falabella घोडा संग पाल्तु जनावर फार्म को साथ पारिवारिक रमाईलो को लागी स्थल हो-रमाईलो र सिक्ने को यो महान संयोजन Lullymore एक "जरूरी छ "हेर्नुहोस्" जब Kildare भ्रमण।
माइल र पैदल र वन्यजन्तु को माईल - सबै उमेर बन्द जाडो cobwebs उडाउन को लागी सही! उत्तर-पश्चिम Kildare मा स्थित, Donadea वन पार्क मिश्रित वुडल्याण्ड र शुद्ध आनन्द को 243 हेक्टेयर हो।
२.३ हेक्टेयर तालमा बतखलाई खुवाउनु अघि घाँसको माध्यमबाट हवाइजहाज, पर्खालको बगैंचामा हिँड्नुहोस् र आइस हाउसमा चिसो। तनाव मुक्त जीवन यसको उत्कृष्ट मा। नामित राष्ट्रिय विरासत स्थल मा अधिक जानकारी पाउन सकिन्छ यहाँ.
क्लोनफर्ट पाल्तु फार्म।
जनावरहरु सधैं बच्चाहरु संग एक हिट छन्! साथै प्यारो साथीहरु, Clonfert पनी दुई आउटडोर खेल मैदान क्षेत्रहरु दुबै उछाल महलहरु, एक इनडोर खेल क्षेत्र, गो karts, एक फुटबल पिच, पिकनिक क्षेत्रहरु को धेरै र धेरै धेरै तपाइँको परिवार को मनोरन्जन राख्न को लागी।
बच्चाहरु लाई खुला फार्म संगै ल्याउनुहोस् जहाँ उनीहरु जनावरहरु लाई भेट्न सक्छन् र निवासी हस्तिहरु, Rizzo, स्यान्डी र हेक्टर, प्रसिद्ध अल्पाका संग ह्या hang्ग आउट गर्न सक्छन्!
Kildare साँच्चै यो सबै छ-विश्व स्तरीय घोडा, प्राचीन आयरिश महल, र पक्कै पनि, खुद्रा थेरापी!
किल्डारे गाउँ डबलिन बाट एक घण्टा भन्दा कम विश्व स्तर को फेसन र homeware ब्रान्ड को १०० बुटीक संग स्थित छ। Kildare गाउँ सिफारिश खुदरा मूल्य हप्ताको सात दिन र सबै वर्ष राउन्ड मा 100% सम्म को बचत प्रदान गर्दछ! त्यसोभए तपाइँ के को लागी पर्खिरहनु भएको छ? किनमेल पाउनुहोस्!
Leixlip महल Thisismariamckee
यो एक प्राचीन आयरिश महल को यात्रा बिना Kildare वरपर एक साहसिक हुनेछैन!
इतिहास मा डराएको, Leixlip महल ११1172२ मा बनाइएको थियो र प्राचीन फर्नीचर, टेपेस्ट्री, चित्रहरु र चित्र र एक ठूलो १th औं शताब्दी गुडिया घर, र अधिक जस्तै केहि असामान्य वस्तुहरु को धेरै वस्तुहरु छन्।
महल पनि एक गोथिक ग्रीनहाउस, मन्दिर सीट, gazebo र गेट लज को घर हो।
Killinthomas वुड्स Staceypender 93
Rathangan गाउँ को बाहिर मात्र एक छोटो दूरी आयरल्याण्ड को सबैभन्दा राम्रो प्रकृति को लागी गोप्य राखिएको छ! काउन्टी Kildare मा Killinthomas काठ सीधै एक परीकथा बाट केहि जस्तै छ र हामी यहाँ Kildare मा विश्वास यो आयरल्याण्ड को सबै भन्दा आश्चर्यजनक वुडल्याण्ड मध्ये एक हो!
२०० एकर सुविधा क्षेत्र एक मिश्रित दृढ काठ कोनिफर वन धेरै विविध वनस्पतिहरु र जीवहरु संग छ। त्यहाँ ती सबै पर्वतारोहण प्रेमीहरु को लागी काठ मा signposted हिड्ने को बारे मा १० किमी को दूरी मा छन्, र यी पारिस्थितिकी तंत्र को एक विस्तृत विविधता को लागी पहुँच दिन्छ।
Keith Mahon - TheTaste.ie (rmrkeithmahon) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
Kildare भूलभुलैया सबैले अनुभव गर्नु पर्ने कुरा हो! Leinster को सबैभन्दा ठूलो हेज भूलभुलैया एक सस्तो मूल्य मा परिवारहरु को लागी राम्रो पुरानो जमाना रमाईलो संग एक चुनौतीपूर्ण र रोमाञ्चक दिन बाहिर प्रदान गर्दछ। बाहिर ताजा हावा मा, यो परिवारहरु को लागी एक दिन संगै रमाईलो को लागी एक महान ठाउँ हो!
हेज भूलभुलैया १ 1990 ० को अन्त मा स्थापित भएको थियो र २००० मा जनता को लागी खोलिएको थियो। तब देखि यो एक प्रमुख विकास कार्यक्रम शुरू गरीएको छ, महान नयाँ आकर्षणहरु लाई तपाइँ एक अधिक रमाईलो र रमाईलो दिन दिन को लागी।
यो ठाउँ साना अन्वेषकहरु र ठूला साहसीहरु को लागी एक जस्तै छ, एक दिन बाहिर सबैले आनन्द लिनेछन्!
Wallabies, उल्लू र emus को लागी प्रकृति ट्रेल्स र वुडल्याण्ड हिड्ने वा अन्तरक्रियात्मक petting क्षेत्रमा जनावरहरुको आनन्द लिनुहोस् - सबै तपाइँको केक हुनु भन्दा पहिले र कफी पसल मा यो खाना।
Athgarvan रोड, Newbridge
न्यूब्रिज सिल्वरवेयर 9
80 वर्ष भन्दा बढीको लागि न्यूब्रिज सिल्वरवेयर डिजाइन र Newbridge, कं Kildare आज मा यसको निर्माण सुविधा मा गुणस्तरीय टेबलवेयर शिल्प गरीएको छ, आजीवन अनुभव संग शिल्पकारहरु गहना र गिफ्टवेयर को अतिरिक्त मा उस्तै सीप र मायालु हेरचाह संग उत्कृष्ट टेबलवेयर फैशन जारी छ।
स्टाइल आइकनहरु को आफ्नो मुक्त गर्न को लागी संग्रहालय फैशन संग्रह र कलाकृतिहरु जो एक पटक आधुनिक समय को केहि महान शैली आइकनहरु जस्तै ऑड्रे हेपबर्न, मर्लिन मुनरो, राजकुमारी ग्रेस, राजकुमारी डायना, बीटल्स र धेरै धेरै संग सम्बन्धित थिए। संग्रहालय भ्रमण गर्न आगन्तुक केन्द्र को लागी एक यात्रा लिनुहोस्, केहि लंच लिनुहोस् र केहि विशेष इन-स्टोर प्रस्तावहरु ब्राउज गर्नुहोस्!
बाहिर एक दिन संग साधारण बाट बच Redhills साहसिक Kildare। Redhills साहसिक के एक पटक पुरानो काम फार्म Kildare गाउँ बाट केहि किलोमिटर मात्र M7 टाढा र रेड गाय राउंडअबाउट बाट ३५ मिनेट मुनि रहेको मा सेट गरिएको छ। आगन्तुकहरु लाई एक कार्य पैक दिन बाहिर आदर्श, रमाईलो र सुरक्षित गतिविधिहरु को लागी फरक को एक दायरा संग बाहिर को पेशकश। तिनीहरूको गतिविधिहरु भूमि आधारित नरम रोमांच हो कि सबै फिटनेस स्तर र चासो को लागी उपयुक्त छन्।
उनीहरु सबै वर्ष-राउन्ड, सोमबार देखि आइतबार आठ वा बढी को लागी समूह बुकिंग को लागी खुला छन् र व्यक्तिहरु हाम्रो खुला ट्याग गेमिंग सत्र मा हरेक सप्ताहांत मा सामेल हुन सक्छन् ताकि तपाइँ एक समूह को आवश्यकता छैन।
Castletown हाउस Parklands
Castletwown हाउस Parklands
Castletown मा सुन्दर मा पार्कल्याण्ड को आनन्द लिनुहोस्। त्यहाँ पैदल यात्रा र पार्कल्याण्ड अन्वेषण गर्न कुनै प्रवेश शुल्क छैन। कुकुरहरु लाई स्वागत छ, तर एक नेतृत्व मा राखीनु पर्छ र ताल मा अनुमति छैन, वन्यजीव गुँड छ।
दौड मा एक दिन
नास र न्यूब्रिज
नास रेसकोर्स १
थोरब्रेड काउन्टी को एक यात्रा हाम्रो विश्व प्रसिद्ध racecourses को एक मा दौड दिन को अनुभव बिना पूरा हुनेछैन। Kildare मा घोडा दौड शताब्दीयौंदेखि भएको छ, र यी स्थानहरु काउन्टी को डीएनए को एक ठूलो हिस्सा को प्रतीक। दौड दिन को रोमाञ्च परम्परा संग यति डराएको छ, आगन्तुकहरुलाई संस्कृति को स्वाद यति अद्वितीय छ कि यो एक अनुभव हो कि तपाइँ कहीं पनी पाउन सक्नुहुन्न। काउन्टी तीन प्रमुख रेसकोर्स, Naas, Punchestown र The Curragh को घर हो, जस मध्ये प्रत्येक बैठकहरु र घटनाहरु को एक पूरा मौसम प्रदान गर्दछ। मई वार्षिक Punchestown महोत्सव, यस्तो एक उच्च प्रोफाइल घटना हो कि यो सबै को बाल्टी सूची मा छ ल्याउँछ।
विश्व स्तरीय गल्फ
K क्लब पाल्मर 7
कुनै गोल्फ प्रेमीहरु को लागी Kildare को लागी एक यात्रा एक गोल बिना पूरा हुने छैन (वा दुई!) हाम्रो च्याम्पियनशिप को पाठ्यक्रमहरु मध्ये एक गोल्फ महानहरु, अर्नोल्ड पाल्मर, कोलिन मोन्टगोमेरी र मार्क O'Meara सहित डिजाइन गरीएको हो।
निस्सन्देह यूरोप मा शीर्ष गोल्फ रिसोर्ट्स को एक, पाँच तारा के क्लब होटल र गोल्फ रिसोर्ट दुई भव्य गोल्फ कोर्स को घर हो कि २००olf मा राइडर कप सहित धेरै च्याम्पियनशिप को माध्यम बाट गोल्फ को सर्वश्रेष्ठ स्वागत छ।
घर एक होइन तर दुई च्याम्पियनशिप गोल्फ कोर्स को लागी, कार्टन हाउस गोल्फ आयरल्याण्ड को सबैभन्दा प्रसिद्ध र प्रतिष्ठित गोल्फ स्थलहरु मध्ये एक हो। निजी पार्कल्याण्ड को १,१०० एकर भित्र बसेर, पाठ्यक्रमहरु सुन्दर दृश्यहरु, प्राकृतिक वुडल्याण्ड्स र ऐतिहासिक Palladian मनोर घर को पृष्ठभूमि बाट लाभान्वित।
पार्कल्याण्ड वा आन्तरिक लिंक को एक छनौट संग, त्यहाँ Kildare मा गोल्फ को सबै शैलीहरु अनुरूप केहि छ। एक टी समय बुक गर्नुहोस् र यो तपाइँको लागी अनुभव गर्नुहोस्।
मनमोहक रोयल नहर ग्रीनवे स्तर टोपाथ को 130km, पैदल यात्रीहरु, धावकहरु र सबै उमेर र चरणहरु को साइकल चालकहरु को लागी आदर्श हो। विश्वव्यापी Maynooth मा शुरू, यो आकर्षक Enfield र जीवन्त Mullingar लंगफोर्ड मा आकर्षक Cloondara को लागी २०० बर्ष पुरानो नहर को अनुसरण गर्दछ, क्याफेहरु, पिकनिक स्थलहरु र बाटो मा आकर्षण संग। देहाती र औद्योगिक परिदृश्य, रोलिंग क्षेत्रहरु, सुन्दर वाटरसाइड गाउँहरु, काम गर्ने तालाहरु र ऐतिहासिक स्थलचिन्ह संग जोडिएको छ। साइकल वा कुनै मुख्य शहरहरु को बीच मा हिड्नुहोस् र ट्रेन बाट फर्कनुहोस् जहाँ तपाइँ शुरू गर्नुभयो। पालना गर्नुहोस् जहाँ एक पटक घोडा को लागी बार्गे यात्रा गरीयो र बाटो मा लुकेका वन्यजीव आश्चर्यहरु को लागी एक नजर बाहिर राख्नुहोस्।
Kildare VR अनुभव को महापुरूष
Kildare6को महापुरूष
"Kildare को किंवदंतियों" इमर्सिभ 3D अनुभव आगन्तुकहरु लाई समय मा फिर्ता पुरानो Kildare को विरासत र पौराणिक कथाहरु को खोज गर्न को लागी सेन्ट ब्रिगेड र Fionn म्याक Cumhaill को कथाहरु को माध्यम बाट।
तपाइँको धेरै आफ्नै मध्ययुगीन गाइड उपलब्ध संग, तपाइँ Kildare मध्ययुगीन साइटहरु को इतिहास सहित सेन्ट ब्रिगेड कैथेड्रल र गोल टावर र भर्चुअल वास्तविकता को माध्यम बाट प्राचीन आगो मंदिर जान्न सक्नुहुन्छ।
यस भ्रमणले आयरिश कथा सुनाउने कला लाई बिल्कुल नयाँ आयाममा ल्याउँछ, रोमान्स, वीरता र Kildare को प्राचीन अतीत को त्रासदीहरु लाई कब्जा गरीरहेको छ जुन हाम्रो अभय र कैथेड्रल को भग्नावशेष मा प्रतिध्वनित हुन्छ। भ्रमण Kildare को लागी एकदम सही परिचय हो, तपाइँको भूख whetting को लागी जब तपाइँ व्यक्ति मा हाम्रो प्राचीन साइटहरु को यात्रा।
पूर्व १th औं शताब्दी मार्केट हाउस मा स्थित, Shackleton संग्रहालय प्रसिद्ध अन्टार्कटिक अन्वेषक सर अर्नेस्ट Shackleton को शोषण को अनुसरण गर्दछ। यसको हाइलाइट्स एक मूल स्लेज र उनको अन्टार्कटिक अभियानहरु र एक 18ft बाट दोहन शामिल छ। Shackleton को जहाज धीरज को मोडेल।
परिवारजोडेइतिहास प्रेमीहरूसाहसिक खोज्नेहरूपहिलो पटक भ्रमणचीज गर्न को लागी